July 2013 ~ IT Guide Myanmar
Xiaopan OS ဖြင့် WPA/WPA2-PSK ပတ်စဝေါ့အား အလစ်သုတ်နည်း အဆင့်ဆင့်
12:59 PM Xiaopan OS No comments
ဟိုတလောတုန်းက Beini နဲ့ WEP ပတ်စဝေါ့အလစ်သုတ်နည်း ပြောပြပြီးတဲ့နောက် အခုတခါ ဘော်ဘော်တွေက WPA/WPA 2-PSK တွေကိုပါ အလစ်သုတ်ချင်လာနေကြတယ်.... အဲ့ဒီတုန်းက Beini 1.2.3 ပဲထွက်သေးတော့ wpa ကိုရယူဖို့ ရာ Distionary Attack နဲ့ ပဲရသေးတော့ အဲ့ဒီမှာ ခေါင်းစားကုန်ကြတယ်.... အဲ့ဟာကြီးက ဘာကြီးမှန်းမသိဘူးပေါ့... အဲ့ဒါနဲ့ ပဲ လက်လျော့လိုက်ရတယ်...
အခုတခါတော့ Beini 1.2.5 ထွက်ရှိလာတဲ့အခါ wpa ပတ်စဝေါ့ကို အလစ်သုတ်ဖို့Reaver ဆိုတဲ့ဖန်ရှင်ပါလာတဲ့အခါ အရင်လို ခေါင်းမစာတော့ပဲ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့အလစ်သုတ်လို့ ရလာတော့ အဲရစ်လို လူပြိန်းငတက်ပြားအတွက် အဆင်ပြေလာတယ်.... ဒါနဲ့ ပဲ တစ်ရက်တော့ မလေးရှားမှာနာမည်ကြီး ယူနီဖိုင်ဆိုတဲ့ wpa2-psk ပတ်စဝေါ့ကို အလစ်သုတ်ကြည့်မိတယ်..... ဒါနဲ့ ပဲ နေ့ လည် ၁၂ နာရီလောက်မှာ စပီး ခိုင်းတော့တာပဲ...... တစ်နေကုန်လွှတ်ထားလိုက်တယ်... ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီး.... ညနေ ၅ နာရီလောက် ကြည့်လိုက်တော့ ၃၀ % ပဲရှိသေးတယ်..... ဒါနဲ့ ဆက်လွှတ်ထားလိုက်တယ်..... ည ၁၀ နာရီကျပြန်တော့ ၅၅ % ... စောင့်ကြည့်မနေတော့ပဲ လွှတ်ထားလိုက်တော့တယ်.... မနက်မိုးလင်းကြည့်လိုက်တော့ ပတ်စဝေါ့ရပြီးဖြစ်နေတယ်.... မနက် ၃း၁၅ မှာရနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့ ၉၂.၈၆ % မှာ ပတ်စဝေါ့ထွက်တာကိုတွေ့ ရတယ်..... ဆိုတော့ နာမည်ကြီး ယူနီဖိုင်ကို အလစ်သုတ်တာ ၁၅ နာရီလောက် ကြာတယ်လို့ ပြောရမယ်.....
နောက်တခါ ယူနီဖိုင်မဟုတ်ပဲ ရိုးရိုးလိုင်း wpa2-psk ကျတော့ ကြာချိန် ၇ နာရီရှိတယ်.... ဒါကြောင့် wpa2-psk ကိုအလစ်သုတ်ဖို့ ကြာချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီကနေ အများဆုံး ၁၆ နာရီလို့ ဆိုလိုရမယ်ထင်တယ်.... စိတ်ရှည်ဖို့ နဲ့ အလစ်သုတ်မယ့်လိုင်းက ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့လိုင်းဖြစ်မယ်ဆို အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလစ်သုတ်နိုင်မှာပါ....
အခုအဲရစ်ပေးမယ့်နည်းလမ်းက Xiaopan ဆိုတဲ့ iso လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်..... Beini နဲ့ တူတူပဲ.... သူ့ ကို ဒေါင်းပီးတော့ CD တစ်ချပ်လုပ်.... ပီးရင် CD ကနေ Boot တက်ပေးဖို့ ပဲ..... ဒေါင်းဖို့ က အောက်က လင့်မှာနော်.... 68MB ရှိတယ်...
CD ကတော့ လူတိုင်နီးပါးလုပ်တတ်လို့ မပြောပြတော့ဘူး.... အဲ.... CD ရှာရခက်တယ်... လောလောဆည် မရှိသေးဘူးဆိုရင်လဲ USB Pendrive နဲ့ လဲ အဆင်ပြေပါတယ်..... Pendrive ကို bootable လုပ်ဖို့ ကျတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်.... 5MB ရှိတယ်....
ဒေါင်းတဲ့အခါ ပြန်ရှာရလွယ်အောင် desktop ပေါ်မှာပဲသိမ်းထားတာ ကောင်းပါတယ်....
၂ခုစလုံး ဒေါင်းပီးပီဆိုရင် ပထမဦးဆုံး bootable pandrive လုပ်ဖို့ အတွက် unetbootin ကိုဖွင့်ပါ....
အောက်ကပုံစံအတိုင်း ၁း Diskmiage ကို click နှိပ်ပါ.... ၂း မျှားပြထားတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပီး ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ Xiaopan ကို ရှာပီးရွေးပေးပါ.... ၃း pendrive ရဲ့ တည်နေရာပါ.... ပီးရင်တော့ ၄ အတိုင်း Ok နှိပ်ပါ....
အောက်ကပုံကတော့ bootable pendrive လုပ်နေတာပါ... ပီးရင်တော့ Reboot Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
Boot ပြန်တက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ က Boot Order ပြန်ပြောင်းပေးရပါမယ်.... အဲရစ်စက်က boot order ပြောင်းဖို့F12 ကိုနှိပ်ရပါတယ်.... စက်အမျိုးအစားအလိုက် Boot order ပြောင်းရင် နှိပ်ရတဲ့ခလုတ် မတူညီပါဘူး... Desktop ကျပြန်တော့ F11. ဒါလဲ ပုံသေပြောလို့ မရပါဘူး.... အဲရစ်စက်ကတော့ Acer ပါ.... ဒါကြောင့် Boot တက်တက်ချင်း F12 ကိုနှိပ်ပါတယ်....
အောက်ကပုံကတော့ Boot Order ထဲဝင်သွားပုံပါ...
ရောက်သွားရင် USB ရဲ့ တည်နေရာနံပါတ်ကိုကြည့်ပါ... နံပတ်3ဖြစ်တဲ့အတွက် နံပတ်3ဆီအောက်မြှားနှိပ်သွားပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ....
အော်တို Boot လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်...
boot လုပ်ချိန် ခဏလေးစောင့်ပါ....
Xiaopan ထဲ ရောက်သွားပါပြီ...
ရောက်သွားရင် အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း minidwep-gtk ကို နှိပ်ပါ...
တကယ်လို့ စက်မှာ wireless card တစ်ခုထက်ပိုတပ်ထားရင် wlan0 ဆိုတာကိုနှိပ်ပီး wireless ကိုရွေးချင်ရွေးနိုင်ပါတယ်.... တစ်ခုထက်ပိုရင် wlan0, wlan1, wlan2 စသဖြင့် မြင်ရပါမယ်.... ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ...
မြှားပြထားတာကိုနှိပ်ပီး WEP or WPA/WPA2 စဖြင့်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်... အခုက WPA2 ကိုအလစ်သုတ်မှာဖြစ်လို့ရွေးချယ်စရာ မလိုပါ....
ပီးရင်တော့ Scan နှိပ်ပါမယ်...
Scan လုပ်ပီး လိုင်းတွေတက်လာပုံပါ.....
မြင်ရတဲ့ လိုင်း၂လိုင်းမှာ အပေါ်ကလိုင်းက WPA2-PSK ဆိုပြီး နောက်မှာ Client Address နဲ့wps ဆိုတာပါတယ်....
အောက်ကလိုင်းက WPA နောက်မှာ wps ပဲပါတယ်....
ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ အနောက်မှာ wps ပါတဲ့လိုင်းတွေက အလစ်သုတ်ရတာလွယ်တယ်....
အဲ့ထဲကမှ အပေါ်ဆုံးကလိုင်းလို Client Address လဲပါမယ်.... သုနောက်ကမှ wps ပါတဲ့လိုင်းဆို ပိုအသေချာဆုံးပါပဲ....
ဒါကြောင့် အပေါ်ဆုံးကလိုင်းကို click နှိပ်ပီး Reaver ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.....
Ok နှိပ်ပီးတဲ့နောက် စတင် အလုပ်လုပ်နေပါပြီ.... Trying Pin ဆိုပြီး ဂဏန်းလေးတွေတက်နေပါမယ်....
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း 0.04% ကို ၃၆ စက္ကန့် ကြာတယ်ဆိုတော့ ၁၀၀% ဖြစ်ဖို့ တော်တော် အချိန်ယူရမှာပါ....
အဲရစ်စမ်းသပ်ပီးသလောက်တော့ ၉၂% ကျော်ကျော်လောက်မှာ ပတ်စဝေါ့ ထွက်ပါတယ်.....
အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်းထွက်လာပါမယ်.... အားလုံးကို ရေးမှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်.... အလည်က WPA PSK က သုပတ်စဝေါ့ပါ.... ဒါကတော့ Beini 1.3.5 ရဲ့ နမူနာပုံစံပါ... အဲ့လိုမြင်ရပါ့မယ်.... ၉၅% မှာ ပတ်စဝေါ့ထွက်ကြောင်းလဲ လေ့လာမှတ်သားမိပါတယ်...
အခုဆိုရင် အားလုံလိုချင်နေတဲ့ wpa/wpa2-psk ကိုအောင်မြင်စွာ အလစ်သုတ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့မလေးရှားက သူငယ်ချင်းတွေ အကန့် အသတ်မရှိ သုံးနိုင်တဲ့ သာမာန်လိုင်းတွေထက် ပိုမြန်တဲ့ ယူနီဖိုင် ဆိုတာကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.... အကန့် အသတ်မရှိသုံးနိုင်တော့ သူလဲမသိသာတော့ဘူးပေါ့.....
အဓိကကတော့ အလစ်သုတ်မယ့်လိုင်းက ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့လိုင်းဖြစ်ဖို့ နဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဇွဲမလျော့ပဲ မနားတမ်း ထိုးဖောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်....
အဲရစ် ( Eric Kim )
Credit : မလေးဆီက အဝေးရောက် ခရီးသည်
12:43 PM Free SMS, မြန်မာပြည်သို့ FREE CALL No comments
မြန်မာပြည် သို့free call, sms ပို့ ချင်ရင် အောက်ပါ လင့် ခ် လေးကို
နှိပ်ပြီး ပေးပို့ နိူင်ပါသည် လုပ်နည်းလေးကတော ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှာ မြင်တဲ့ Enter number
ဆိုတဲ့ နေရာ နိူင်ငံ ကုဒ် နဲ့ ဖုန်း နံပတ် ကို ထည့်ပြီး call နှိပ်ပါ.
watch ad and rewrite the text below ဆိုပြီး တက်လာပါလိမ့်မည် အဲဒီမှာ ပေးထားတဲ့
စာလေးတွေကိုမှန်အောင်ထည့်ပြီး send ကို နှိပ်လိုက်ပါ
Adobe Flash Player Settings တက်လာရင် Allow ဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.ဒါဆိုရသွားပါပြီ တခုတော့
ပြောချင်တယ် အချိန်က စက္ကန့် ၃၀ ပဲပေးတာပါ sms ကိုတော့ ကြိုက်သလောက် ပို့လို ရပါတယ်
မသိသေး မရှိတဲ့လူများအတွက်ရည်ရွယ် ပါသည် အောက်ပါ လင့် ခ်ကို နှိပ်ပြီး ပို့ ကြပါစို့ ...
ဒီမှာ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ...တကယ်လို ဒီလိုင်းကနေ အဆင့်မပြေဘူး ဆိုရင်
နောက်ထပ် ပို့လိုရတဲ့ နေရာတခုကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒီက နေသွားလိုက်ပါ။
အဆင်ပြေကြပါစေ ဆန္ဒများစွာဖြင့် 
12:34 PM iPhone နှင့်ပါတ်သက်သမျှ No comments
♥ မျှဝေသူ ♥ မိုးညိုသား at 12:237comments
12:32 PM Nokia ဖုန်းနှင့်ပတ်သမျှ No comments
ကျွန်တော့်ကို တော်တော်များက မေးကြပြုကြလို့ ကျွန်တော်ရေးပါတယ်..
Commemt တွေမှာလည်းတွေ့ပါတယ်..ကူပါအုံး ..
Nokia ဖုန်းကို မြန်မာဖောင့် ဘယ်လို ထည့်လို့ရလဲ အကို ရေတဲ့..
ဟုတ်ကဲ့ ဒီလို ထည့်ပါတယ်..
ပထမ ဖုန်းကို ဟက်က ပါ့မယ်..ဒီတော့ အောက်က ဟာလေးတွေကို ဒေါင်းထားလိုက်ပါ..
ဒေါင်းပြီးရင် ဖုန်း memory card ထဲထည့်လိုက်ပါ...ဖုန်းထဲ မှာ memory card တော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..
အဆင့် ၁. NortonSymbian.sisx ကို Install လုပ်ပါ.
အဆင့် ၂. Install လုပ်ပြီးရင် အဲဒါကို Open ပါ..Options ကိုသွားပါ..Anti-Virus ကိုထပ်သွားပါ..
Quarantine list ကိုရွေးပါ..Options ကိုနှိပ်ပါ..Restore ကိုနှိပ်ပါ..
အဆင့် ၃. ဖုန်း Settings ထဲ Application mgr(manager) ကိုသွား.. ကျလာတဲ့ အထဲက Symantec Symbian H***
အဆင့် ၄. ခုနဒေါင်းထားတဲ့ အထဲက RomPatcherPlus_ 3.1 lite.sisx ကို install လုပ်လိုက်ပါ..
နောက်တခုလည်း အဲ့ဒီ အတိုင်းလုပ်ပါ..
ဒါဆိုရင် ဖုန်းကို ဟက်တဲ့ အဆင့်ပြီးသွားပါပြီ..ဖောင့်ထည့်ဖို့ပဲ လိုပါတော့မယ်..
ခုနဒေါင်းထားတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာ ဖောင့်ပါပါတယ်..Memory crad ရောက်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်..
ကိုယ့်ထည့်ထားတဲ့နေရာ မှာသွားရှာပြီး install လုပ်လိုက်ပါ..သူဘာမေးမေး လုပ်မယ်ပဲ ဖြေပေးပါ...
ဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ကဲ နားညီးအောင်လာလာပြောနေတဲ့ ဘော်ဒါအပေါင်းတို့ ဖုန်းကို Restart သာချလိုက်ပါတော့ဗျာ..
ဟက် လို့ရတဲ့ Nokia ဖုန်းရဲ့ model တွေပါ...ကိုယ့်ဖုန်းက ဘာ model လဲဆိုတာ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ..
ဒီ model တွေထဲမှာမှ ကိုယ့်ဖုန်း model မပါသေးရင်တော့ လည်း sorry ပါ..
အဆင်မပြေတာ ရှိရင်လည်း comment ထားခဲ့ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
11:40 AM Nokia ဖုန်းနှင့်ပတ်သမျှ No comments